हुमालॉग बनाम नोभोलोग: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण भारी खेल प्रेस चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> हुमालॉग बनाम नोभोलोग: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
हुमालॉग बनाम नोभोलोग: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
मधुमेह भएका लाखौं अमेरिकीहरूले नियमित इन्सुलिन प्रयोग गर्छन्, चाहे यो टाइप १ मधुमेह, टाइप २ मधुमेह, वा गर्भलिंग मधुमेह हो। मधुमेह र नोभोलोग जस्ता इन्सुलिनहरू मधुमेह भएकाहरूमा रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। तर यी ईन्सुलिन उत्पादनहरूका बीच के भिन्नता छ?
हुमालोग र नोभोलोग द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिन हुन् जुन अन्य ईन्सुलिनहरूको तुलनामा छिटो र छोटो अवधिमा कार्य गर्दछ। रगतमा ग्लुकोजको स्तर नियन्त्रण गर्न वा दिनभरि इन्सुलिन पम्पको साथ लगातार नियन्त्रण गर्न भोजनको अघि उनीहरूलाई प्रशासित गर्न सकिन्छ। इन्सुलिन ऊर्जाको लागि शरीरको कोशिकामा चिनीको अपटेक बढाउँदै काम गर्दछ। चिनी (ग्लूकोज) ऊर्जा उत्पादन र समग्र शारीरिक कार्यहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
हुमालोग र नोभोलोगले समान तरिकाले काम गर्न सक्दछन्। तर ती विनिमय हुँदैनन्। मतलब, एक अर्कोको लागि प्रतिस्थापन हुन सक्दैन। यो किनभने तिनीहरूसँग कसरी सिफारिश र प्रयोग गरिन्छ भन्नेमा केही भिन्नताहरू छन्।
हुमालोग र नोभोलोग बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
हुमालोग एक द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिन एनालग हो जुन १ 1996 1996 in मा एफडीए-द्वारा अनुमोदित भएको थियो। यो समान रासायनिक संरचनाको साथ मानव इन्सुलिनको समान छ। हुमालोगलाई यसको जेनेरिक नाम इन्सुलिन लिजप्रोबाट पनि चिनिन्छ, छाला अन्तर्गतको इंजेक्शनको लागि एक समाधानको रूपमा उपलब्ध छ (subcutaneous)।
Humalog इन्सुलिन १० mL र m mL मल्टि-डोज शीशियन साथ साथै m mL कारतूस र पूर्व भरिएको कलम (Humalog KwikPen, Humalog टेम्पो पेन, Humalog जुनियर KwikPen) मा आउँछ। हुमालोगका सबै फर्म्युलेसनहरूमा १०० एकाई / एमएल (यू -१०) हुमालॉग क्विकपेन बाहेक इन्सुलिन हुन्छ, जुन २०० युनिट / एमएल (U-२००) संस्करणमा पनि आउँदछ।
नोभोलोग एउटा द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिन एनालग हो जुन यसको जेनेरिक नाम इन्सुलिन एस्पार्टले चिनिन्छ। यो रासायनिक रूपमा नियमित मानव इन्सुलिनसँग मिल्दोजुल्दो छ यस बाहेक यसमा डिस्पिएन एसिडको सट्टा यसको डीएनए संरचनाको भागमा प्रोलीन एमिनो एसिड छ। नोभोलोग २००० मा एफडीए स्वीकृत भयो।
हुमालोग जस्तै, नोभोलोग १० मिलि मल्टि-डोज शीशी बिरामीहरू वा प्रदायकहरूलाई आफ्नै सिरिन्जका साथ चित्रण गर्नका लागि उपलब्ध छन्। नोभोलोग3एमएल कार्ट्रिज (पेनफिल कार्ट्रिज) र पूर्व भरिएको पेन (नोभोलोग फ्लेक्सपेन, नोभोलोग फ्लेक्स टच) मा पनि आउँदछ। यी फॉर्मूलेसनहरूमा इन्सुलिन एस्पार्टको १०० एकाइ / एमएल हुन्छ।
हुमालोग र नोभोलोग बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग इन्सुलिन इन्सुलिन
जेनेरिक नाम के हो? इन्सुलिन लिजप्रो इंजेक्शन इन्सुलिन एस्पार्ट इंजेक्शन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? Subcutaneous इंजेक्शन को लागी समाधान Subcutaneous इंजेक्शन को लागी समाधान
मानक खुराक के हो? इन्सुलिन खुराक अत्यधिक परिवर्तनशील हो र एक व्यक्तिको अवस्था, आहार, र जीवनशैलीको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। रैपिड अभिनय गर्ने इन्सुलिन सामान्यतया ०. to देखि १ युनिट / किलोग्राम / दिनको एक खुराक दायरामा खाना खानु भन्दा पहिले वा पछि २ देखि times पटक दिइन्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? मधुमेह एक प्रगतिशील रोग हो जसलाई प्रायः इन्सुलिनको साथ आजीवन मर्मतको आवश्यकता पर्छ।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? टाइप २ मधुमेह भएका वयस्कहरू
वयस्क र 1 बर्ष र माथिका बच्चाहरु टाइप १ मधुमेहको साथ टाइप २ मधुमेह भएका वयस्कहरू
वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरू टाइप १ मधुमेहको साथ
सर्तहरू हुमालॉग र नोभोलोग द्वारा उपचार गरिएको
हुमालोग र नोभोलोग दुवैले मधुमेह भएका मानिसहरूलाई रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न सिफारिश गरिएको इन्सुलिनको ब्रान्ड नामका प्रकारहरू हुन्। यी द्रुत-अभिनय इन्सुलिनहरू टाइप १ वा टाइप २ मधुमेह भएकाहरूको उपचार गर्न अनुमोदित छन्।
हुमालोग र नोभोलोगलाई पनि गर्भलिंग मधुमेह, वा गर्भवती महिलाहरूमा हुने मधुमेहको उपचार गर्न अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ। मधुमेहका लागि जोखिम कारक भएका महिलाहरूले अनुभव गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ गर्भधारण मधुमेह गर्भावस्था को समयमा। हुमालोग र नोभोलोग जस्ता इन्सुलिनहरू पनि मधुमेहको केटोसिडोसिस, एक गम्भीर जटिलताबाट हुन सक्ने उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ उच्च ketone स्तरहरू टाइप १ मधुमेह भएकाहरूमा - र सायदै पनि टाइप २ मधुमेह भएको।
सर्त हुमालोग नोभोलोग
टाइप १ मधुमेह हो हो
टाइप २ मधुमेह हो हो
गर्भवती मधुमेह अफ-लेबल अफ-लेबल
मधुमेह ketoacidosis अफ-लेबल अफ-लेबल
के Humalog वा Novolog अधिक प्रभावी छ?
Humalog र Novolog छिटो अभिनय प्रभाव प्रदान जब सही तरिकाले प्रशासित। इन्सुलिन पेटको क्षेत्र, फिला, माथिल्लो हतियार, वा नितम्बहरूमा एक इन्जेक्शनको रूपमा दिइनु पर्छ। हुमालोग र नोभोलोग दुबै रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्नका लागि समान रूपमा प्रभावकारी छन्।
जे होस् दुबै इन्सुलिनहरू छिटो काम गर्दछन्, नोभोलोग हुमालोग भन्दा केही छिटो काम गर्दछ। नोभोलोगलाई खाना खानु भन्दा ected देखि १० मिनेट भित्र ईन्जेक्सन गर्न सकिन्छ जबकि हुमालोगलाई खाना खानु भन्दा १ 15 मिनेट भित्रै ईन्जेक्सन गर्नुपर्दछ।
अन्य प्रकारका इन्सुलिनको तुलनामा, द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिन राम्रो विकल्प हुन सक्छ जब खाना अघि वा पछि ग्लूकोज नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिन्छ। बाट एक मेटा-विश्लेषणमा मधुमेह थेरापी अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि द्रुत अभिनय गर्ने इन्सुलिन नियमित इन्सुलिनको तुलनामा टाइप १ मधुमेहको लागि खाना खाने इन्सुलिनको रूपमा बढी प्रभावकारी थियो। रैपिड-अभिनय इन्सुलिनहरू पनि सुधार गर्न पाए HbA1c स्तरहरू टाइप १ मधुमेह भएका व्यक्तिहरूमा बढी प्रभावकारी।
चाहे तपाईं हुमालोग, नोभोलोग, वा ईन्सुलिनको अर्को प्रकार निर्धारित गरिएको छ तपाईंको समग्र अवस्थामा निर्भर गर्दछ। तपाईको लागि उत्तम इन्सुलिनको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
कभरेज र हुमालॉग बनाम नोभोलोगको लागत तुलना
हुमालोग र नोभोलोग ब्रान्ड र जेनेरिक फार्महरूमा उपलब्ध छन्। केहि, तर सबै मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरूले इन्सुलिन कभर गर्दैन जब यो ईन्सुलिन पम्प द्वारा प्रशासित हुन्छ बाहेक। जब इन्सुलिनलाई इन्सुलिन पम्पको साथ प्रशासित गर्न आवश्यक हुन्छ, मेडिकेयर पार्ट बीले यसको लागतलाई समाहित गर्न सक्दछ। तपाईंको बीमा योजनाको सूत्रहरू जाँच गर्नुहोस् कि के कभर गरिएको छ र तपाईंको जेबको खर्च के हुन सक्दछ।
यहाँ सम्म कि यदि तपाइँको बीमा योजना मा इंसुलिन कभर, तपाइँ एक सिंगलकेयर कार्ड संग अधिक बचत गर्न को लागी सक्षम हुन सक्छ। सामान्य Humalog को लागी मूल्य $ 300 को रूप मा हुन सक्छ। एकलकेयर कूपनको साथ, यो लगभग5१5। हो। त्यस्तै, नोभोलोगको लागि कुपनले १० मिलि वायलको लागि $ 300 बाट लगभग १$० डलर कम गर्न सक्दछ। दिमागमा राख्नुहोस्, इन्सुलिनको मूल्यहरू शीशी र कारतूसबीच भिन्न हुन सक्छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? कभर हुन सक्छ; बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ कभर हुन सक्छ; बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ
सामान्यतया चिकित्सा द्वारा कभर? कभर हुन सक्छ; बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ कभर हुन सक्छ; बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ
मानक खुराक १० मिलि वायल (खुराक फरक हुन्छ) १० मिलि वायल (खुराक फरक हुन्छ)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे 8 31855$।
एकलकेयर लागत । १-०-। १ .०6१6-- $ १55
हुमालॉग बनाम नोभोलोगको साझा साइड इफेक्टहरू
हुमालोगको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टमा टाउको दुखाइ, मतली, पखाला, पेट दुख्ने (पेटको दुखाइ), घाँटी दुखाइ (फरेन्जाइटिस), नाकबाट बहेको (राइनाइटिस), र मांसपेशिको कमजोरी (एस्थेनिया) हो।
के हुन्छ यदि तपाइँ धेरै भिटामिन खानुहुन्छ?
नोभोलोगको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरूमा टाउको दुखाइ, मतली, पखाला, पेट दुखाइ, राइनाइटिस, छाती दुख्ने, र संवेदी गडबडी समावेश छ।
इन्सुलिनको अन्य साइड इफेक्टमा स्थानीय पीडा, जलन, खुजली, वा इन्जेक्शनको साइट वरिपरि जलन समावेश हुन सक्छ। धेरै जसो साइड इफेक्ट हल्का छन्। यद्यपि, अधिक गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाहरू हुन सक्छ जो इन्सुलिन तत्त्वहरूमा संवेदनशील हुन्छन्।
टाउको दुखाई हो २%% हो १२%
मतली हो %% हो %%
पेट दुखाई हो %% हो %%
दुखेको घाँटी हो २%% हैन N / A
नाक बाट पानी बग्नु हो बीस% हो %%
मांसपेशी कमजोरी हो %% हैन N / A
छातीको दुखाइ हैन N / A हो %%
संवेदी गडबडी हैन N / A हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( हुमालोग ), डेलीमेड ( नोभोलोग )
हुमालॉग बनाम नोभोलोगको ड्रग अन्तर्क्रिया
हुमालोग र नोभोलोग इन्सुलिनले धेरै फरक औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। ग्लिपिजाइड वा ग्लाइब्राइड जस्ता एन्टिआडायबेटिक एजेन्टहरू कहिलेकाँही रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न ईन्सुलिनको साथ प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि इन्सुलिनको साथ यी औषधिहरूको प्रयोगले खतरनाक रूपमा कम रगतमा चिनीको मात्रा, वा हाइपोग्लाइसीमियाको जोखिमलाई बढाउन सक्छ।
प्रेडनिसोन वा डेक्सामेथासोन जस्ता कोर्टिकोस्टेरोइडले रगतमा ग्लूकोजको मात्रा बढाउन सक्छ। त्यसकारण, यी औषधि सेवनले इन्सुलिनको प्रभाव घटाउन सक्छ। एन्टिसाइकोटिक्स वा डायरेटिक्स जस्ता औषधि सेवन गर्दा पनि इन्सुलिनको प्रभाव कम गर्न र इन्सुलिन प्रतिरोध क्षमता बढाउन सक्छ। यी अन्य औषधीहरू लिँदा इन्सुलिन खुराक समायोजित हुन आवश्यक पर्दछ।
बीटा-ब्लकरहरू ईन्सुलिन को प्रभाव परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, बीटा-ब्लकरहरूले हाइपोग्लाइसीमियाको स mas्केतहरू मास्क गर्न सक्छन् जुन गलत ईन्सुलिन खुराक लिइसकेपछि हुन सक्छ। यसले खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ जुन अनुगमन गर्न आवश्यक छ।
तपाइँको औषधि अन्तर्क्रियाको सम्भावना रोक्नको लागि कुनै औषधि लिईरहनुभएको छ भनेर तपाइँको डाक्टरलाई भन्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग हुमालोग नोभोलोग
रिपग्लिनाइड एन्टिडायबेटिक एजेन्टहरू हो हो
डेक्सामेथासोन Corticosteroids हो हो
Olanzapine एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक्स हो हो
Chlorthalidone डायरेटिक्स हो हो
Labetalol बीटा-ब्लकरहरू हो हो
* अन्य औषधीको कुराकानीको लागि एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको परामर्श लिनुहोस्।
हुमालोग र नोभोलोगको चेतावनी
हुमालोग वा नोभोलोग जस्ता इन्सुलिनहरू प्रयोग गर्दा सधैं हाइपोग्लाइसीमियाको जोखिम हुन्छ। कम रगत चिनीको लक्षणहरूमा मतली, भोक, भ्रम, र कमजोरी समावेश हुन सक्छ। यस कारणका लागि, यस ग्लुकोज ट्याब्लेटहरू बोक्न सिफारिस गरिन्छ यो सम्भावित जीवन-जोखिमपूर्ण अवस्थाको प्रतिकार गर्न। ईन्सुलिनको सही मात्रा प्रशासित भइरहेको छ भनेर सुनिश्चित गर्न अन्य औषधीहरूका साथ थेरापी होशियारीपूर्वक समन्वय गरिनु पर्छ।
तपाईंले हुमालोग वा नोभोलोग प्रयोग गर्नबाट बच्नु पर्छ यदि तपाईंसँग उनीहरूको कुनै पनि सक्रिय सामग्रीहरूमा ज्ञात संवेदनशीलता छ भने। अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरूमा गम्भीर दाग वा सास फेर्न समस्या हुन सक्छ (anaphylaxis)।
सिरिंज, पूर्व भरिएको कलम, र कारतूसहरू मधुमेह भएका अन्य व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्नु हुँदैन। अरू कसैको इन्सुलिन उपकरणको प्रयोगले तपाईंलाई एचआईभी संकुचनको उच्च जोखिममा पार्न सक्छ।
इन्सुलिन प्रयोग गर्दा लिनका अन्य सावधानीहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के हुन्छ यदि तपाइँ तपाइँको एंटीबायोटिक्स समाप्त गर्नुहुन्न?
हुमालॉग बनाम नोभोलोगको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
हुमालोग भनेको के हो?
हुमालोग एक द्रुत अभिनय गर्ने इन्सुलिन एनालग हो जो मधुमेह रोगीहरूमा रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। वयस्कहरूमा टाइप २ मधुमेह र 1 बर्ष र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरूमा टाइप १ मधुमेहको उपचारका लागि एफडीए अनुमोदित छ। हुमालोग इन्सुलिन लिसप्रोको ब्रान्ड नाम हो।
नोभोलोग भनेको के हो?
नोभोलोग एउटा द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिन एनालग हो जसले मधुमेह भएका मानिसहरूलाई रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्न सक्छ। वयस्कहरूमा टाइप २ मधुमेह र २ बर्ष र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरूमा टाइप १ मधुमेहको उपचारका लागि अनुमोदित छ। नोभोलोग इन्सुलिन एस्पार्टको ब्रान्ड नाम हो।
हुमालोग र नोभोलोग एकै हो?
होईन, हुमालग र नोभोलोग एकै होइनन्। उनीहरूसँग थोरै फरक फर्म्युलेसनहरू, उमेर प्रतिबन्धहरू, र उनीहरूको प्रयोगको साथ सम्बन्धित लागतहरू छन्।
के हुमालग वा नोभोलोग राम्रो छ?
हुमालोग र नोभोलोग दुबै रगत ग्लुकोज कम गर्नका लागि प्रभावकारी छन्। यद्यपि नोभोलोगले हुमालोग भन्दा अलि छिटो काम गर्दछ। ल्यान्टस (इन्सुलिन ग्यालेजिन) जस्ता लामो-अभिनय गर्ने इन्सुलिनहरूको तुलनामा, द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिनहरू खाना खानुभन्दा अघि र पनी रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न अझ उपयुक्त हुन्छ। तपाईंको अवस्थाको लागि उत्तम इन्सुलिनको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा हुमालोग वा नोभोलोग प्रयोग गर्न सक्छु?
यस अनुसार अमेरिकी मधुमेह संघ , गर्भवती हुँदा मधुमेह नियन्त्रणको लागि उपचारको पहिलो रेखा ईन्सुलिन हो। यो प्लेसेंटा पार गर्न फेला परेन। त्यसकारण, यो गर्भावस्थामा प्रयोगको लागि सुरक्षित मानिन्छ।
म रक्सीको साथ Humalog वा Novolog प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
इन्सुलिन प्रयोग गर्ने बखत रक्सी त्याग्नै पर्छ। यसको कारण रक्सीले रगतमा चिनी घटाउने इन्सुलिनको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ सम्भावित hypoglycemia कारण ।
इन्सुलिन लिस्पप्रो र इन्सुलिन एस्पर्ट बीच के भिन्नता छ?
इन्सुलिन लिजप्रो र इन्सुलिन एस्पार्ट दुई-सामान्य रूपहरू छिटो अभिनय गर्ने इन्सुलिन हुन्। जे होस्, ती रसायनिक रूपमा कार्यको अलिक फरक अनसेटको साथ भिन्न छन्। इन्सुलिन लिजप्रो १ 15 मिनेट भित्र काम गर्दछ जबकि इन्सुलिन एस्पार्टले to देखि १० मिनेट भित्र काम गर्दछ। एक इन्सुलिन तपाईंको बीमा योजना मा निर्भर अन्य भन्दा सस्ता हुन सक्छ।
कुन इन्सुलिन NovoLog सँग तुलना गर्न सकिन्छ?
नोभोलोग अन्य द्रुत-अभिनय गर्ने इन्सुलिनहरू जस्तै हुमालोग (इन्सुलिन लिसप्रो) र एपिड्रा (इन्सुलिन ग्लुलिसिन) सँग तुलना गर्न सकिन्छ। उनीहरूको द्रुत कार्यको सुरूको कारण, नोभोलोग, हुमालॉग र एपिड्रा प्राय: भोजनको समय इन्सुलिनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले काम गर्न सुरू गर्न २० मिनेट भन्दा कम समय लिन्छन् र लगभग चार घण्टाको कुल समयावधिको लागि अन्तिम हुन्छ।
१२ औषधिहरू जो सुक्खा मुखको कारण (र यसलाई कसरी गर्ने)
के तपाइँ काउन्टर मा zofran पाउन सक्नुहुन्छ?
यसको मतलब के हो यदि तपाइँसँग उच्च क्रिएटिनिन स्तर छ?
कति मिलीग्राम काउन्टर ibuprofen मा छ
जब डेपो शट काम गर्न सुरु हुन्छ
म नेबुलाइजर मेसिन कहाँ किन्न सक्छु?